Ụbọchị My Pet » Olee otú Iji Mee Open Relationships Ọrụ
site Li yen
Olee otú Iji Mee Open Relationships Ọrụ
emelitere ikpeazụ: Jan. 20 2021 | 3 min agụ
E a akara site a Brooke Fraser song nke na-aga "Ezi ịhụnanya bụ ike ịhụnanya". Nke a nwere ike ịbụ ihe ọzọ apt. N'adịghị ka na Mills & Boons ihunanya akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ Disney fim, mmekọrịta adịghị mgbe niile ejedebe na di na nwunye ndị ịnyịnya gaa n'ime anyanwụ dara. Gịnị na-agbata mgbe ndịa nke ịhụnanya bụ mgbalị na nkwa. Ụmụ mmadụ na-agbalịsi ike izu okè na ma ọ nwere ike na-ochie ngwa ngwa. Ndụ bụ mgbagwoju anya ezu enweghị na-obibi na ihe nile bu pụta ụwa ejije. On n'akụkụ nke ọzọ nke na ọnụ ọgụgụ, e nwere ndị nọ mmekọrịta onye na-emeghe ka mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ma ọ bụ ịhụ ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na okwu bụ "na-emeghe mmekọrịta" e bandied banyere n'ihi na ezi oge ụfọdụ ugbu a, doro anya definition ihe gụnyere ụdị mmekọrịta na-anọgide na-agbagwoju anya n'ihi na ọtụtụ ndị na-.
Gịnị kpọmkwem Open Relationships?
Ụfọdụ na-ekwu na ịbụ na-emeghe mmekọrịta na-enye ndị mmadụ nnwere onwe na mgbanwe nke ịbụ mmasị na-enweghị kwukwara arọ nke na-atụ anya na nkwa nke monogamy. Ndị ọzọ na-opine na ọ bụ ihe dị nnọọ a fancy ụzọ ikwe mmekọ na-aghọ aghụghọ n'ule ọ bụla ọzọ. N'agbanyeghị ihe ọ bụla echiche, e nwere anya ihe ịrịba ama na-egosi na-emeghe mmekọrịta na-arụ ọrụ mgbe jisiri na edozi ọma. Dị ka ndị ọzọ na mmekọrịta, ya niile na-adabere ihe onye ọ bụla chọrọ. O doro anya na, ndị na-ndị a na ụdị mmekọrịta dị ize ndụ nke chere ihu dị iche iche nke mgbu. N'adịghị ka mmekọ na monogamous mmekọrịta, ndị na-emeghe mmekọrịta adịghị nwere nhọrọ nke na-eru na "ọ / ọ ghọgburu na m" kaadị. Ya mere, olee otú otu onye na-aga banyere n'ịhụ na-emeghe mmekọrịta bụ ihe ịga nke ọma ma na-adịru otu?
Ihe mgbaru ọsọ na Inyefe Onwe
N'ihi na EBIDO, e kwesịrị mma - ma nke anụ ahụ na nke mmetụta uche - n'etiti abụọ ọzọ. Ka emechara, nke ga-abụ isi ihe mere ha abụọ bụ ndị ọnụ na akpa ebe. Dị nnọọ n'ihi na ha na-ahapụ onwe ha na-emeghe ka ịgagharị na ndị ọzọ nwere mmasị ọzọ ekwesịghị derail si eziokwu na mmadụ abụọ kpebiri na ime ka onye ọ bụla ọzọ na ha onwe ha ụzọ. Na-arụ ọrụ site na nke a mma, mkpebi maka onye na-emeghe mmekọrịta pụrụ ịbụ nanị na ha abụọ bụ ndị ka na-nkọ na ịgagharị ọzọ nhọrọ. N'ihi ya, inwe ike jikwaa na-emeghe mmekọrịta bụ ihe n'ịhụ na abụọ ọzọ ịghọta "iwu" nke egwuregwu. Dị nnọọ ka a ahụkarị monogamous mmekọrịta, ndị na-emeghe mmekọrịta ga-ha onwe ha ụkpụrụ dị ka nke ọma. Ntụziaka ka a ọma oghe mmekọrịta na-enwe abụọ ọzọ nghọta na-eme ka otu iwu.
Ime ihe n'eziokwu-aga A Long Way
Dị ka ihe ọ bụla ọzọ na ndụ, n'eziokwu bụ nnukwu akụkụ nke na-emeghe mmekọrịta. Ka emechara, ndabere nke ihe na-emeghe mmekọrịta bụ eziokwu na e nwere ike ịtụkwasị obi n'etiti ndị mmekọ. Nanị ụzọ na nke a nwere ike na-arụ ọrụ bụ ma ọ bụrụ na mgbe niile eziokwu ndị ọzọ. Ọ bụkwa gbasara ijikwa na-atụ anya. N'ịbụ onye na-emeghe mmekọrịta dị yiri nnọọ ka ndị ọzọ ụdị mmekọrịta na ị na-ahụ n'ebe nile. Dị ka ogologo oge bụ na ha abụọ mma na ihe na-eme ka ahụ Ọnọdụ mmekọrịta nke ha na-enwe ike nọgidere na-arụ ọrụ n'ebe a na ihe mgbaru ọsọ, na e nweghị ihe mere na-emeghe mmekọrịta agaghị adịru ogologo osisi. Otu ihe dị mkpa mgwa a ọma oghe mmekọrịta bụ nke a: ihe ọ bụla mmadụ na-atụ anya na site na ya? Ọ bụrụ na nke a bụ na itinye n'ọnọdụ, emeghe mmekọrịta ka atọrọ ka na-aga.
N'ezie, onye na-emeghe mmekọrịta abụghị maka mmadụ nile. Dị nnọọ ka ndị ọzọ ụdị mmekọrịta, ọ nwere ike na ejedebe na obi mgbawa. Otú ọ dị, ọ pụkwara ịbụ a nnọọ uru mmekọrịta ngwá ọrụ karịsịa maka ndị na-enwe obi ụtọ na a otu ebe onye mgbe ndị nwere ohere izute ndị ọzọ n'otu oge ahụ. Ọtụtụ nwere ike opine na-emeghe mmekọrịta aga megide nnọọ ndabere nke ezi pụtara nkwa na ịhụnanya. Otú ọ dị, e nwekwara ikpe adịru mmekọ na-emeghe mmekọrịta n'ezie adịghị ahọrọ ụbọchị ma ọ bụ izute ndị ọzọ. Ndị ịga nke ọma na-emeghe mmekọrịta mgbe na-ahụ na a na-nyere nnwere onwe na ụbọchị ndị ọzọ n'ezie na-adọta ha nso ha mmekọ. Ihe bụ isi eziokwu mmekọrịta bụ n'ezie bụghị labeelu na otu onye ga-etinye na ha, ma ha ike nke onye ọ bụla ọzọ na-eme ka ụda mkpebi ndị dabeere na ibe nghọta.
5 Echiche na-agbanwe Romance
G-Abù Eziokwu na Echiche Ụgha
Top 5 Chick ịfegharị aka Movies N'ihi Mme
© Copyright 2021 Ụbọchị My Pet. Mere na site 8celerate Studio